Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Nkwa -> Ezigbo agwa
Ezigbo agwa: [Nkwa]
1 JỌN 4:20
Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị, “Ahụrụ Chineke nꞌanya,” ma nọgide na-akpọ nwanna ya asị, onye ahụ bụ nnọọ onye ụgha. Nꞌihi na ọ bụrụ na ọ hụghị nwanna ya nꞌanya, bụ onye ọ na-ahụ anya kwa ụbọchị, ọ̀ ga-esi aṅaa hụ Chineke nꞌanya bụ onye ọ na-ahụbeghị anya?
2 TIMỌTI 2:15
Na-arụsị ọrụ gị ike ka ị bụrụ onye Chineke ga-agwa okwu sị, “Ị meela nke ọma.” Bụrụ onye naarụ ọrụ ọma, onye ihere na-apụghị ime mgbe Chineke ga-enyocha ọrụ gị. Mara ihe okwu Chineke na-ekwu, matakwa otu e si akọwa ya.
ỌLU OZI 2:42
Ha jiri oge nile ha nwere na-anụ ihe ndị ozi Kraịst na-ezi ha. Ha kenyere ndị ọzọ ihe ha nwere.
Nke a bụ ọrụ m na-arụ. Ana m arụkwa ya nꞌihi ike dị ukwuu nke na-arụkwa ọrụ nꞌime m.
Ọ bụ Kraịst nwụrụ nꞌihi mmehie anyị dị ka Chineke Nna zubere na ọ ga-anwụ, ịgbapụta anyị site nꞌụwa ọjọọ a, nke anyị bi nꞌime ya.
Ya mere, ka ike ghara ịgwụ anyị ime ihe ọma. Nꞌihi na mgbe e mesịrị, mgbe oge ya ruru, anyị ga-eweta ngọzi dị ukwuu dị ka ihe ubi, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mba.
Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jisọs gwara igwe mmadụ ahụ okwu sị, “Mụ onwe m bụ onye na-enye ndị bi nꞌụwa ìhè. Onye ọ bụla sooro m agaghị ejegharị nꞌime ọchịchịrị, kama ìhè ahụ ga-anọnyere ya ruo mgbe ebighị ebi.”
Ma ndị ọzọ kwuru sị, “Ọ dịghị ekwu okwu dị ka onye mmụọ ọjọọ na-achị. Mmụọ ọjọọ enweghị ike ime ka anya onye kpuru ìsì meghee.”
Jisọs sịrị ha, “Bịanụ soro m. Aga m eme unu ndị ọkụ na-akụta mmadụ.”
Ụmụnna m, nꞌezie, abụbeghị m ihe ahụ m kwesịrị ịbụ. Ma ihe m ji ike m nile na-eme bụ ichefu ihe nile gara aga, na ilekwasị anya nꞌihe ahụ m na-agbaso dị m nꞌihu.